အင်္ဂလန်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ကလာပ် အသင်း
ယခင် အာဆင်နယ်နှင့်အင်္ဂလန်အသင်း၏ရှေ့တန်းကစားသမား တက်ဒရိတ်အား ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် မန်နေဂျာအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ သူသည် အသင်းကို လူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး လေ့ကျင့်မှုစနစ်ကို တိုးတက်စေခဲ့သည်။ အောက်တန်းနှင့်အပျော်တမ်းလိဂ်များမှလိမ္မာပါးနပ်သောလက်မှတ်ထိုးမှုများဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၄-၅၅ခုနှစ်တွင် ချဲလ်ဆီးအသင်း၏ပထမဆုံးဆုကြီးအဖြစ် လိဂ်ချန်ပီယံဆုရရှိအောင် ဉီးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ရာသီတွင် UEFA သည် ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဘောလုံးလိဂ်နှင့်အက်ဖ်အေမှကန့်ကွက်မှုများအပြီး ချယ်လ်ဆီးသည် မစတင်မှီပြိုင်ပွဲမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးသည် ဤအောင်မြင်မှုကို မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ဘဲ ကျန်ရှိနေသေးသော ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း ဇယားအလယ်၌နေခဲ့ရသည်။ ဒရိတ်ကို ၁၉၆၁ တွင်ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး ကစားသမားနည်းပြ တမ်မီ ဒိုချာတီဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
DF အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ
DF မားကို့စ် အလွန်ဆို
DF အန်ဒရေ ခရစ်စတန်ဆန်
DF သီရာဂို ဆေးလ်ဗား
FW တမ်မီ အေဘရာဟမ်
FW တီမို ဗာနာ
MF ရူဘင် လော့ဖ်တပ်ချိ
GK ဝီလီ ကာဘာလီယို
DF ဖီကာရို တိုမိုရီ
FW အိုလီဘာ ဂီးရောဒ်
FW ကယ်လမ် ဟတ်ဆန်အိုဒွိုင်း
DF ဘန် ချေဝဲလ်
MF ဟာကင် ဇီးရက်စ်
MF ဘီလီ ဂေးမော
MF ရီစီ ဂျိမ်းစ်
DF အက်ဇ်ပီလီကွဲတား (အသင်းခေါင်းဆောင်)
MF ကိုင် ဟာဗာဇ်
DF အီမာဆင် ပါမီရီ
အငှား နည်းစနစ် နည်းပြများ
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား − (၁) ကြိမ် − (၂၀၁၂)
↑ All Time League Attendance Records။ nufc.com (22 September 2015)။ Please note, pre-war figures come from unreliable sources.
↑ For the appearance and goalscoring records of all Chelsea players, see Glanvill, Rick (2006). Chelsea FC: The Official Biography, 399–410။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချဲလ်ဆီးဘောလုံးအသင်း&oldid=543911" မှ ရယူရန်
၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။